मन्त्री हुँदा ६ वटा गाडी, पद गए पछि सुटकेश बोकेर मोटरसाइकलमा - News20 Media
मन्त्री हुँदा ६ वटा गाडी, पद गए पछि सुटकेश बोकेर मोटरसाइकलमा
June 8, 2021 N20LeaveaComment on मन्त्री हुँदा ६ वटा गाडी, पद गए पछि सुटकेश बोकेर मोटरसाइकलमा
जेठ २५, काठमाण्डौ
सोमवार विहान एउटा तस्बिर सामाजिक सञ्जामा निकै भाइरल भएको छ । बर्खास्तीमा परेका प्रदेश नम्बर २ का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनल सुटकेश बोकेर बाहिर नि’स्किए । अनि मोटरसा’इकलको पछाडी बसेर मन्त्री क्वार्टरबाट बाहिरिए । उनी मन्त्री हुँदा ६ वटा साधन प्रयोग गर्थे । तर आइतबार जनता स’माजवादी पार्टी नेतृत्वबाट बर्खा’स्तीमा परेका सोनल क्वार्टर छोडेर बा’हिरिदा देखिएका दृष्य हुन् यि ।
मन्त्री सोनल एउटा सुट’केश र झोला बोकेर मन्त्री क्वार्टरबाट बाहिरिएका थिए । उनले सरकारी गाडी फिर्ता गरेपछि बाइक चढेर जनकपुरको मधेश भवनबाट निस्केका छन् । आइतबार जसपा प्रदेश २ संसदीय दलको बैठकले मन्त्री सोनलसहित राज्यमन्त्री सुरेश मण्ड’ल, अभिराम शर्मा, डा।डिम्पल झालाई बर्खास्त गरेको थियो । राम्रो मन्त्रालयको जिम्मेबारी लामो’समय सम्हालेका उनले सचिवालयमा ३ सहित ६ वटा सरकारी गाडी प्र’योग गर्दै आएका थिए।
मन्त्राल’यमा रहँदा उनको कार्यकाल विवाद रहित भने थिएन । उनले मन्त्रालयका योजनामा व्यापक भ्रष्टा’चार गरेको आ’रोप लाग्दै आएको छ। डेढवर्ष अघि एक कार्य’क्रममै उनले पैसा लिएर योजना बेचेको भन्दै उनकै अगाडि एक व्यक्तिले आरो’प लगाएका थिए।
को थिए माओत्सेतुङे ? के हो माओवाद ? पढ्नुहोस ईतिहास
मुख्यमन्त्री भट्टले पाए विश्वासको मत, यी दलले विपक्षीमा मत दिए
ओलीको यस्तो घोषणा : काग्रसेमा छायो खुसीयाली
यो विपत्तका बेला आज १४ वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुँदै, यस्तो छ कारण
सपथ खानेबित्तिकैको अभिव्यक्तीले विवादमा तानिएका महतोले फेरि यो के बोले ? मन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्ने तयारी
June 5, 2021 N20